Sabayon, angamba ilay distro | mpampiasa be mpampiasa indrindra Avy amin'ny Linux
Rehefa avy nilaozana Ubuntu tapa-bolana lasa izay noho ny ranomaso izay nanomboka nahatezitra ahy Compiz amin'ny MPlayer indraindray ary tselatra dia hitako fa nitsambikina avy tany distro ka distro aho, avy OS PCLinux, dia Debian Sid, dia Chakra, fa amin'izy ireo ihany no tiako tamin'ny hatsarana sy tamin'ny fampisehoana OS PCLinux. Teo no nisedra olana vitsivitsy antenaiko OS PCLinux amboary ny andro sasany ary mieritreritra aho fa matotra:
- OS PCLinux Izy io dia manana fonosana tranainy sy matevina izay tsy te-hanavao na dia angatinao aza izany: Skype 2.2 amin'ny kinova x64, FFmpeg tamin'ny roa taona lasa ary tsy misy fanohanana 10-bit, VLC izay tsy mahay milalao mkv, Tomahawk ao kinova 0.3 (Eo amin'ny 0.6 izy), Spotify amin'ny 0.6, roa taona lasa izay (tsy azo ampiasaina sy midona).
Farany aorian'ny nitaterana ireo zavatra ireo tamin'ny forum OS PCLinux, ary rehefa tsy noraharahaina aho dia leo ny distro ary nanohy ny fikarohana ary tao no tadidiko Sabayon, distro iray volana lasa izay dia nanandrana nametraka tamin'ny PC misy sary aho AMD tsy misy valiny, fa izao aho afaka nanandrana ny pc niaraka tamiko NVidia.
Vonona ny hisintona ny 2 gigs of iso aho, noraketiko tamin'ny pendrive izany ary niasa ny zava-drehetra ary vatomamy maso hatrany am-piandohana, ireo mpamily NVidia ireo manana fananana dia natomboka hatramin'ny voalohany, ny Chromium misy flash dia teo amin'ny iso ary zavatra izay tena sarobidy amiko, ny endritsoratra amin'ny birao dia toa tsara hatrany am-boalohany (mitsikera Debian / Archlinux / OpenSuse / Fedora).
Ilay installer mora, nampahatsiahy ahy izany Fedora taloha, tao anatin'ny 10 minitra dia efa vonona sy miasa ny rafitra. Tiako ny tsy namoy ny Splash niaraka tamin'ny mpamily NVidia, toy ny hoe nanjo ahy foana io tao Ubuntu ary gaga aho ny amin'ny fiverenany GNOME Shell amin'ity distro ity, izay tsy hitako fa nisy distro hafa hitako fa be ranoka.
Ny safidin'ireo fonosana dia lehibe tokoa, azonao atao ny mahita amin'ny Spotify amin'ny kinova farany, mankany Steam, IDJC, Urban Terror, Tomahawk, samy Chrome sy Chromiun, VMWare Player, sns, ao anaty trano fitahirizana nefa tsy mila mijery any amin'ny toerana anaovana azy ivelany na mandehana mametraka amin'ny pkgbuilds toy ny amin'ny Arch (na dia afaka mampiasa Gentoo ebuilds aza ianao).
Nahagaga ahy ihany koa ny fanamorana ny fanavaozana ny Kernel miaraka amin'ireo mpamily NVidia. Vao omaly aho dia te hametraka ny Kernel 3.8.5 ary mila mametraka fonosana kely fotsiny aho NVidia nahafahako nanao ny blob niasa mivantana tao anatin'io kernel io koa, tsy namerina ny module ary tsy nanana tantara an-tsary izay ananako maro tao amin'ny Ubuntu (zavatra toa ny mpamily miasa ao amin'ny kernel 3.5 fa tsy ao amin'ny 3.6 na ny mifamadika amin'izany ).
Asongadiko ihany koa ny fanohanana tsy misy fotony ho an'ny solosaina finday UEFI sy Optimus, ary koa ny kernel misy patch bfs izay manome traikefa amin'ny birao nohatsaraina.
Ka azoko antoka fa afaka miteny aho fa raha tianao ny fandehanan'ny rà, raha tianao ny haharaka ny daty, nefa miaraka amin'izay koa milamina, manana tontolo tsara tarehy, mora raisina, havaozina ary tazomina, ary koa mora ny mametraka , nefa tsy mila mandany fotoana kely, ny fikirakirana ny toerana fitahirizana, rakitra an-tsoratra sns, Sabayon, dia distro hodinihina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Sabayon, angamba ilay distro be mpampiasa indrindra
99 hevitra, avelao ny anao
Hmm .. liana te hahafantatra aho .. Inona ny kinova KDE anananao?
kopia apetaho amin'ny tranokala Sabayon "GNOME 3.6.2, KDE 4.9.5 (navaozina ho 4.10.1 raha vantany vao misy), Xfce 4.10, LibreOffice 3.6.3"
Izany dia avy amin'ny iso roa volana lasa izay! Raha vao manavao ianao dia efa eo io, fa eo ihany koa ireo isos isan'andro, aza manadino ny momba ny mpiasa!
kde 4.10.1, heveriko
Eny, manamafy aho fa 4.10.1, hitako teo amin'ny repo fotsiny izy io
Nisy fotoana mbola mpirahalahy kely i Sabayon sy i Nova, nizara equo izy ireo, tsy haiko na mipoitra ihany koa ny fampiasan'i Sabayon, natambatra i Nova roa, nipoitra ho loharano ary equo ho an'ny mimari-droa, fitambarana mahaliana, raha ny marina dia tsy fantaro raha nanohy nanohana ny equo UI nataon'i DH Bahr, mpamorona Nova i Sabayon; Sabayon sy Nova, zanaka adala an'ny Gentoo fa avy eo Nova dia niova avy amin'ny .tbz2 ho .deb, avy amin'ny Gentoo Miorina amin'ny Ubuntu LTS Base, Regards.
Talohan'ny nahatongavako tao Chakra dia nanandrana nanandrana an'i Sabayon aho, saingy rehefa tonga teo amin'ny fizarazaran'ireo kapila aho dia nahita hadisoana iray izay nanakana ahy tsy hitohy. Rehefa nanao famotopotorana aho dia notoroana hevitra hampisaraka ireo diska amin'ny distro hafa amin'ny maody Live, ary avy eo andramo, fa tena demotivated momba an'io raharaha io aho. Nanomboka teo dia tsy nanandrana azy io indray aho. Na dia tsy maintsy milaza aza aho fa bala ny kinova Live!
Apetrako tsotra fotsiny ny fizarazarana mandeha ho azy, tsy tiako ny manana distro mihoatra ny iray amin'ny pc!, Ka navelako nisaraka ny distro, ary na izany na tsy izany, afaka mametraka gparted foana ianao amin'ny cd mivantana ary manao partition
Nanandrana izany aho saingy tsy mandeha ilay izy. Manantena aho fa hanandrana azy io indraindray. Amin'izao fotoana izao dia manomana ny hamindra ny rafiko manontolo ho any Debian aho.
Ary satria mandao an'i Chakra ianao, dia nanandrana distros maro aho tato anatin'ity volana ity, ary ny marina chakra sy ny andohalambo no tsara indrindra nosedramako, kamo fotsiny aho mametraka ny arko ary chakra no eo am-pelatanana.
Ho an'i @ st0rmt4il sy @ F3niX. Chakra no distro KDE tsara indrindra efa nandramako. Haingam-pandeha sy tsara izy io, miampy ny fanavaozana azy matetika. Saingy miatrika fanamby hanjavona maharitra Windows amin'ny solosainako aho, ary mitady distro marin-toerana aho. Mampalahelo fa miaraka amin'i Chakra aho dia nanana olana roa nandritra ny volana maro, izay mbola tsy vitako ny namaha hatreto. Momba ireo roa ireo dia navoakako tao amin'ny forum Chakra Project, saingy tsy nahazo valiny aho, na dia tsy manoratra amin'ny teny anglisy. Izay no antony namelany azy, miaraka amin'ny tsy fahaizan'ny nostalgia, satria manodidina azy ireo dia fantatr'izy ireo fa niaro azy io foana aho (nefa tsy latsaka amin'ny fanatisme, eny). Ary ho ahy, ny dingana lojika amin'ny fitoniana dia i Debian, izay fantatro kely momba izany. Angamba hiverina any Chakra aho indray andro any. Ny zavatra tsy heveriko fa hijanona dia ny KDE.
Debian? .. ary inona no nanjo anao lehilahy Chakra?
Eny, ny fiovana nataonao dia gaga aho hehe!
Eny, fizarazaran'ireo kapila manana safidy maro ianao .. man fdisk man cdisk, tsy zavatra tokony ho fantatrao ny simika nokleary ampiharina
hahahaha, tamin'ny fotoana tsy fantatro. Fantatro bebe kokoa izao.
Ary avy amin'ny Gentoo io! Ny GNU / Linux metadistribution par excellence (:
Eny, saingy tsy mampiasa portage fa entropy, fonosana binary
Raha mampiasa portage izy dia mampiasa ny roa, azonao atao ny mampiasa ny "equo" ho an'ny mimari-droa ary "mipoitra" raha te-hanangona fonosana avy amin'ny repo Gentoo ianao, fa tadidio ny manao "emerge –sync" aloha.
nalaina tao amin'ny wiki-ny…… «Portage (mivoaka) tsy mpitantana fonosana voalohany ho an'ny Sabayon Linux, ary ho an'ny mpampiasa mandroso ihany ity lahatsoratra ity. Raha atao teny hafa, raha tsy mahomby ho anao io dia anao izany. Nampitandremana ianao. »
koa rehefa afangaro ny 2 dia very ny endri-javatra omen'ny Portage ... tsy mitovy izany ...
Mazava fa tsy ny mpitantana voalohany ary miankina aminao ny fampiasana azy, saingy eto tsy nisy nilaza izany, dia nanazava fotsiny aho fa any Sabayon ny portage ary mifanaraka, ary ny mifanohitra amin'izany dia lainga toa ny filazanao an'i Manjaro dia tsy manohana ny AUR miorina amin'ny Arch.
Nampiasa portage fotsiny aho ho an'ny fonosana sasany ary tsy misy olana, ny marina, tokony hampahafantatra bebe kokoa ny tenanao ianao, amin'ity tranga ity dia azo ampitahaina amin'ny archlinux aur
Izay no tiako holazaina hoe "pandev92", nampiasa sabayon nandritra ny vanim-potoana ihany koa aho ary nampiasa portage ho an'ny zavatra rehetra, nametraka ny zava-drehetra avy teo aho ary tsy nanana olana velively, koa inona no hataoko fa sahy miteny aho fa azo antoka kokoa sy mifanaraka amin'ny Sabayon noho ny AUR miaraka amin'i Arch.
lol… andrasana amin'ny Debian io hevitra io…. !!
Ahy ny tianao holazaina? Nampiasa sabayon aho talohan'ny nifindrako ho Debian
Ary navelanao izy?
Tena tsara distro, fa ny zava-misy fa misy ny mpamily tompona toerana amin'ny alàlan'ny default dia miteraka olana amin'ireo karatra horonantsary AMD sasany, satria ny mpamily an'ity orinasa ity ho an'ny linux dia mamela betsaka ny tadiavina.
Gnome Shell ohatra dia tadidiko fa saika tsy azo nampiasaina tao Sabayon 9 izy io, noho ny fahatahorana ireo mpamily. Ary toa tsy misy fomba mora hametrahana ny mpamily AMD maimaim-poana.
Volana lasa izay dia mandeha ara-dalàna izao, miaraka amin'ireo mpamily amd. Ary raha afaka manomboka amin'ny mpamily maimaimpoana ianao, manova ny masontsivana ny boot an'ny kernel, ao anaty cd live, saingy tsy tadidiko izao, tokony hijery azy aho, efa ela no nataoko.
Ahoana no fiasan'ny Sabayon aminao amin'ny Gnome Shell?
Tsara lavitra noho ireo distro hafa rehetra, saingy mazava ho azy, tsy maintsy jerenao izay karatra sary misy anao ...
Raha ny fanazavana, misy ny isos isan'andro
Heveriko fa ny GNOME Shell no olona sariaka indrindra azonay lazaina.
Fa mbola miaraka amin'ny latabatra hafa ihany io.
Efa ela aho no nanandrana izany ary hitako fa tsy afaka nametraka ireo mpamily nVidia aho satria toa tsy nifanaraka tamin'ny kinova X.org farany, ary satria efa mihoatra ny 6 volana ity kinova ity dia nohavaozin'izy ireo sy ireo iza no te-hametraka mpamily nVidia (na, mbola ratsy kokoa aza, ireo izay efa nametraka azy) dia hanelingelina anay ary fahadisoan'i nVidia io.
Ilay mpitantana fonosana sary dia somary tsy mitombina, raha ny fanazavana.
Sabayon dia miorina amin'ny Gentoo, fa ny fahasoavan'ny Gentoo dia ny manangona rafitra manokana, ary raha avy amin'ny dingana 1 tsara kokoa noho ny tsara kokoa. Ny olana amin'i Sabayon dia rehefa manandrana ho sariaka amin'ny mpampiasa ianao dia ahitana fako be dia be izay mahatonga ny rafitra hiadana. Indrindra amin'ny fotoana boot. Etsy ankilany, ny safidin'ny fonosana default dia tsy ny tsara indrindra amin'ny rehetra, raha ny fahitako azy. Manohana azy aho, azoko lazaina fa io no fizarana azo antoka indrindra ao anatin'ireo toetra mihodinkodina, amin'ny heviny fa ny mety hisian'ny zavatra hijanona tsy hiasa miaraka amin'ireto fanavaozana manaraka ireto dia tena tsy azo inoana. Indrindra amin'ny sehatry ny fitaovana satria tsy maintsy apetraka an-tanana ny kinova kernel vaovao.
Ruffus am-pahatsorana, tsy mahamarika booty miadana kokoa noho ny debian sid / fitsapana notsapaiko aho roa andro lasa izay
Mety ho heloka bevava ny fizarana diso amin'ny 3570K raha ny marina ... Na dia mijanona eo amin'ny toerako aza aho miorina amin'ny traikefa fa miadana kokoa noho ny fizarana hafa hanombohana. Na dia azon'i Ubuntu aza ny loka.
Miala tsiny fa miadana kokoa i Sabayon manomboka amin'ny Ubuntu amin'ny ankapobeny. Notsapaiko manokana tamin'ny HDD sy SDD izany ary mitovy ny vokany.
Ary toy izany koa ny fametrahana fanavaozana na fonosana.
Soso-kevitra iray, SSD izany.
Nanandrana izany zavatra izany ihany aho, ary eny, raha manomboka amin'ny ubuntu sy nouveau aho dia mila ubuntu 1 segondra ambany kokoa, fa raha manomboka mitovy aho, miaraka amin'ny mpamily nvidia, dia maharitra 7 segondra aho, ary afaka herinandro vitsivitsy sabayon it would be Ny fifindra-monina avy amin'ny openrc mankany amin'ny systemd d azo alaina ho an'izay maniry azy, tadidio fa amin'ny ankapobeny ny fotoana fanombohana dia tsy noho ny zavatra hafa ankoatry ny fizotrany nanombohana azy. Tsy olana izany fa azo hatsaraina foana, manala ireo zavatra izay tsy ampiasainao.
Ho an'ny fanavaozam-baovao, ny apt-get dia tena miadana, toy ny equo ihany, ny maha samy hafa azy dia ny sabayon manana fitehirizana miadana kokoa, izany no tsikaritro, tsy misy hafa.
Miombon-kevitra aminao aho momba ny fonosana fonosana default!
Hehe, vao omaly aho nametraka Sabayon 🙂
Fotoana vitsy lasa izay, tamin'ny fotoanako toy ny distrohopper dia nanandrana nametraka azy tamin'ny kinova 9 niaraka tamin'ny KDE aho, fa ny LiveCD kosa tsy nihoatra ny fisintomana. Tamin'ny farany dia nilavo lefona aho fa tavela tao anatin'ny faniriana. Androany hanandrana indray aho, fa miaraka amin'i Xfce.
joseucker dia hoy izy:
Notsapaiko tamin'ny solosaina finday NVIDIA misy ny teknolojia optimus ary milaza amiko izy fa tsy manana optimus ny karako, tsy naharesy lahatra ahy izy, aleoko PclinuxOs
Mamaly an'i joseucker
Sabayon dia nitombo hatrany hatrany. Netruner dia nanaitra ahy be dia be ary fitsipika chakra !!!!
Ary izany no antony ampiasanao ny ubuntu LOL
Apetrany izay tadiaviny fa miaraka amin'ny netruner aho. Ary ny fanambaranao dia tsy midika fa ho an'ny chakra ahy dia io no prokde distro tsara indrindra ary ilay netrunner izay nijanonako dia nahagaga ahy ahy.
Amin'ny lafiny iray dia tsy afaka mahatakatra na inona na inona momba ny Unity aho ...
Efa nakariko tamin'ny GNOME izao hanandramako an'izany
Mba misy fanampiana, eto aho. Topazo maso ny repo dia ho hitanao fa misy ny zava-drehetra, na dia mihoatra noho ny ubuntu aza.
tsara distro somary marobe ... na dia tsy sahy manandrana aza aho dia manelingelina ahy ny handao ny arko
Manjaro dia distro isaina ary raha ny fahitako azy dia mpampiasa mahery kokoa noho Sabayon, ho fanampin'izay, araka ny laharan'ny distrikan'i Manjaro izay vao tsy ela akory izay noho i Sabayon izay nihoatra azy ary isan'andro dia nahazo laza bebe kokoa.
Mpampiasa Sabayon aho ary salama tsara, na dia ao amin'ny Windows XP aza aho izao, satria ny faritry ny laboratoara ao amin'ny oniversite ary manoratra eto aho satria nahita ny fampandrenesana an'ity lahatsoratra ity tamin'ny findaiko.
Zavatra iray hafa, Sabayon amin'ny lafiny sasany, rehefa nifandimby ny birao dia nanimba ny Sabayon-ko tamin'ny XFCE, nametraka ny kinova matte ho default aho ary nanodinkodina ary nametraka xfce ary tsara, tsara daholo ny zava-drehetra, saingy, toy ny mahazatra, misy ny applet manjavona. amin'ilay tontonana izay miresaka ny habetsahana, batterie, tambajotra sns.
Tsy misy antony tokony hitsikerana izany fa heveriko fa tsy maintsy bibikely izy io.
Amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny Fedora, Manjaro ary Sabayon 😀 aho
Heveriko fa efa voalaza imbetsaka fa ny distrowatch dia tsy fampahalalana azo antoka, raha ny filazan'i distrowatch mageia, mety hanana mpampiasa betsaka kokoa noho ny ubuntu ary diso izany ...
Ny distrowatch dia mifototra amin'ny tsindry ataon'ny olona amin'ireo disô izay hita ao amin'ny lisitr'izy ireo… ka tsy mahagaga raha saika mitohy tsy tapaka ireo toerana.
Eny, satria io pejy io dia doka be fotsiny fa tsy misy fototra, koa ny mieritreritra momba ny laharana distros fotsiny dia hahatonga anao hahita fa ilay voalohany no tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra ary diso koa raha tsy hiteny hoe blowjob be io
Mino marina aho fa ny mpampiasa dia tsy maintsy mahita distro ary iray mamela azy hiasa ary tsy hiasa saina intsony amin'ny fanovana isaky ny roa, ny olana ho antsika mpampiasa dia ny mitady zavatra vaovao foana, ary avy eo mamarana ny distros ary zavatra isan-karazany, saingy na izany aza, heveriko fa versionite izany
hehe .. azo atao ny mpiara-miasa! .. azo atao hehe! "Versionitis"!
Ary nah, ny zava-mitranga dia ny kinova MATE an'ny Sabayon 11 dia tsy voadio tahaka ny voalazantsika! : s
Amin'ny zavatra hitako, manajro no ahitako azy tsara kokoa noho i Arch.
Ny Aur repos.
Ny fanavaozana ireo mpamily video, xorg ary ny kernel dia tsy nofy ratsy.
Fa mahita izany amin'ny mpiasa kely aho, ary bebe kokoa ao amin'ny KDE.
Izany dia satria:
Faha-1: mifantoka kokoa amin'ny XFCE izy ireo fa tsy amin'ny tsiro fanampiny hafa, angamba raha ny hevitro, manjaro dia mitazona fanontana hafa mba hisarihana ireo mpampiasa vaovao izay manana fomba hafa mankany XFCE, izay asiana lanja bebe kokoa.
Faha-2: satria vaovao izy ity ary satria amin'ny ambaratonga ambony dia manana olona latsaky ny 15 ao amin'ny ekipany (heveriko), ary satria tsy latsaky ny 5 ny mpamorona, ny ambiny dia ny fikojakojana ny mpizara, tranokala, forum ary iray na hafa asa.
Tiako ny hafainganam-pandehany ary hitako fa ny pacman dia mora kokoa sy mora kokoa noho ny apt-get, ho fanampin'ny zava-misy ao amin'ny AUR dia nahita rindrambaiko aho mba hametrahana azy ireo ao amin'ny Xubuntu dia tsy maintsy google ny. izay ihany no zavatra tsy tiako dia ny endrik'ireo endritsoratra tsy dia tsara loatra (Soa ihany fa hitako ny vahaolana teto: http://deblinux.wordpress.com/2013/03/02/tip-mejora-y-mucho-el-renderizado-de-fuentes-en-manjaro-linux/) ary misy olana vitsivitsy amin'ny pacman, izay mora azo (http://wiki.manjaro.org/index.php/Pacman_troubleshooting)
Tsy ratsy mihitsy Manjaro Xfce, fa RR ary manavao amin'ny hafainganam-pandeha tsy mampino. Azonao atao ny mametraka izay tianao, fa (Misy foana ny) tsy afaka manampy ny mpanonta aho, farafaharatsiny mandritra izao fotoana izao. Na izany na tsy izany, ho an'ny androany, mitoetra miaraka amin'i Manjaro Xfce aho.
? dia hoy izy:
Tsy mila distro namana be mpampiasa .. mila zavatra tsotra aho .. izany no ilako arko
Naheno zavatra tena tsara momba ny sabayon aho, na dia tiako aza ny birao LXDE; izany no antony nanaovako endrika manokana ny Debian Squeeze amin'ity birao ity, satria ny namako dia nanandrana nanandrana linux tsy nahomby ary niasa haingana tamin'ny netbooks-ny.
Izy io dia manana mpilalao video, mozika, codecs, mpamily, sary, birao ary zavatra hafa. Ary koa, azonao atao ny mametraka izay tianao avy amin'ny tahiry ofisialy debian.
Ity ny rohy ary izy io dia livecd ihany koa, ka azonao andramana ary raha tsy tianao dia tsy misy na inona na inona mitranga.
mafana ny tanako kely manandrana azy ...
mety misy olona tsara fanahy toa izao ve ka manipy ny vokatry ny baiko maimaimpoana
Mba hanombanana hoe ohatrinona ny ondrilahy nohanina tsy misy fangarony, dia ho an'ny netbook an'ireo antitra manana sary intel 😀
Eny, amin'ny solosaina angamba izay mihoatra ny 2010 dia azonao ampiasaina tsy misy olana izany.
Saingy miankina amin'ny kinova miaraka amin'ny birao "x" izany, raha apetrakao ny KDE dia fantatrao fa mila RAM be dia be ianao.
Heveriko fa izany dia zavatra "ifotony" hahafahana mampiasa Sabayon, raha mila bebe kokoa ianao avy eo dia azonao omena na dia misy i7 aza izay anananao miaraka amina RAM 8 GB eo ho eo hehe 😛
Mieritreritra aho fa afaka manandrana ianao .. fa tena hisafidy ny KDE ho tontolo iainanao ve ianao? .. Heveriko fa manana laharam-pahamehana hafa ianao, sa tsy izany? . Manoro hevitra aho raha hampiasa sabayon ianao satria manary ny KDE sy ny fitaovana ilaina rehetra dia tsy maintsy miatrika ny zava-misy fa tsy ity masinina ity no tena be mpampiasa ka ny laharam-pahamehanao dia ny hatsaran'ny tontolo iainana sy ireo blowjobs ireo.
Kde dia mbola afaka mihazakazaka tonga lafatra amin'ilay masinina, mila miala amin'ny nepomuk fotsiny ianao, manaisotra ny vokan'ny oxygen ary mampandeha ny maody render, mety tsara izany. ary 300mb eo ho eo ihany no laniny. Tsy very izay rehetra atolotray antsika.
Ny fampiasana kde toy izao dia toy ny fampiasana windows tsy misy aero LOL.xrender koa tsy manana vsync ...
Na izany aza, ny fampiasana azy toy izao dia tsara kokoa noho ny tontolo iainana maro, ampiasaiko feno izy io, safidy iray fotsiny no nomeko raha toa ka nampiasa xfce aho.
Modular ny KDE, azo ovaina ... http://i.imgur.com/zU0mTiN.png
Salama, nametraka azy aho rehefa nivoaka ilay torolàlana bilaogy ary andiany sabayon maromaro aho, heveriko fa nahatratra X izany, rehefa nesorin'izy ireo ny fanohanana ny sary ati.
Ny hevitro: distro tena tsara izy io, tsara ny manomboka ary miditra tsikelikely, tena sariaka izy, equo (heveriko fa nantsoina hoe izany) dia natanjaka be tamin'ny fomba fijeriko tamin'izany fotoana izany, izao aho tsy afaka nilaza taminao aho, miaraka amin'i Arch sy Pacman mahafinaritra ahy aho izao [——C oooo]
ary miaraka amin'i debian Wheezy ho distro faharoa
Eny, tsy diso ianao compa, "equo" no mpitantana ny fonosany ary noho izany, hoy ny bilaogy lxnay, izay tompon'andraikitra ao ambadiky ny sabayon dia naverina nosoratana indray izy, nanampy ary nanitsy ireo lesoka tamin'ny kinova taloha.
Sabayon! Distro tena tsara Nampiasa kinova X niaraka tamin'ny Gnome Shell nandritra ny fotoana kelikely aho ary nanidina izy io. Ary efa tranombakoka ny ekipako:
- NVIDIA GeForce 7300 GT misy fahatsiarovana 256 MB.
Mila mitandrina kely ianao amin'ny fanavaozana (Midika izany fa tsy manome adala ny fanavaozana) satria amin'ny tranga sasany dia ilaina ny fidiran'ny mpampiasa. Fa raha fintinina: distro atolotra tanteraka, izay mila fahalalana kely kokoa noho ny hafa.
Tsy tratran'ity distro ity mihitsy aho. Tena tsara ny famerenana azy saingy tsy te hahalala izany aho.
Tena liana te hahafantatra aho, efa ho roa volana taorian'ny nampiasako ny KDE sy chakra, mandeha tsara ny zava-drehetra, ny bundles ihany no tsy mandresy lahatra ahy, fantatro fa ho "madio" ny rafitra, mbola manome alalana ny tenako hizaha toetra ny sabayon aho, ary holazaiko aminao.
Toy ity Manjaro ity raha mila zavatra amin'ny Arch miaraka amin'i Pacman ianao ary ny KDE tsy misy fetra, azonao atao tsara ny mametraka ny rindranasa GTK.
Haingam-pandeha, milamina ary RR!
AleQ dia hoy izy:
Tokony hanandrana ROSA «Desktop fresh» ianao ary hanome valiny tsara momba ny zavatra niainanao,
Ny iray hafa tena tiako dia ny PC-BSD, saingy eo am-panovana izy ireo, manao BSD distro Rolling Release izy ireo ary manana ho avy tena manome toky.
Mamela topi-maso aho: ho avy i Moondrake? Fork an'i Mandriva sa i Rosa? haha mampiahiahy kely ary tsy ho ela dia ho hitan'izy ireo 🙂
Valiny amin'i AleQ
Manana repository tsara ve ny ROSA fresh?
Ny tahiry an'i Rosa dia tokony ho iray amin'ireo feno indrindra amin'ny rehetra .. ary miaraka amin'ny fanavaozana eo noho eo !!
Mamaly an'i Aleq
Mihodina ny BSD, hoy ianao Arch-BSD ?? sa misy hafa
PC-BSD dia rafitra fiasa BSD, miorina amin'ny FreeBSD ary ny rafitra BSD mora ampiasaina indrindra, eny fa na dia mihoatra noho ny sasany amin'ireo linux distros aza, dia mora toy ny ubuntu, magiea, mavokely, openuse. sns sns.
Ny PC-BSD dia rafitra iray manana traikefa an-taonany maro, ankehitriny dia nanapa-kevitra ny hanao azy io ry Rollig, ary efa miasa ao izy ireo,
Ny familiana tsara dia tsy ho .., tsy mila mamerina mametraka ny zava-drehetra fotsiny ..., toa ny fanavaozana ny ubuntu 12.10 ka hatramin'ny 13.04
Tsy misy tanjona amin'ny linux aho ... tsy misy distro maharesy lahatra ahy, amin'izao ambanin'ity iray ity, andramako izany ary ho hitantsika ny zava-mitranga
Antsoina hoe 'distrohopping' izy io.
Andramo ity hahitana ny fandehany.
Mahaliana izany fa hanana fanohanana ny kanelina
azafady, diso aho, tsy nikasa ny hametraka an'io eto aho
"Farany, rehefa avy nitatitra ireo zavatra ireo tao amin'ny forum PCLinux OS, ary tsy noraharahaina aho, dia leo ny distro ary nitady hatrany ..." Nampiasa PCLinuxOS nandritra ny fotoana ela izy mandra-pahatsapako fa nitondra ahy tsara ireo forum nataony, dia nanapa-kevitra aho hanao toa anao ...
Misisika hatrany aho ... andramo ny Pear OS 7 ... Azoko antoka fa tsy hanenenanao izany; fanazavana bebe kokoa momba ity distro ity eto: http://germanlancheros.blogspot.com.ar/2013/04/disponible-pear-linux-7-64-bits-y-server.html
Notsapaiko herinandro lasa izay ary raha ny marina, manana ny osx-ko ..., tsy hitako izay ilana fitiliana pear os, anzima, aorian'ny fametrahana azy dia nirodana haingana be ...
Tersogar dia hoy izy:
Niaraka tamin'i Sabayon-Xfce nandritra ny roa volana aho ary tena tsara ny zavatra niainako. Ny fampiasana ny tahiry sabayon-isan-kerinandro dia nahafahako nankafy milamina miorina eo akaikin'ny Entropy sy ny equo.
Misarika ny saiko fa amin'ny forum sy irc, ireo mpikambana na dia sariaka aza izy ireo dia mampiroborobo ny fivoaran'ny mpampiasa ary mandà ny fiankinan-doha. Noho io dia nahafantarako bebe kokoa momba ny Sabayon sy Gnu / Linux.
Valiny tamin'i Tersogar
Tena marina :), mahafinaritra ireo forum, sariaka, fantatr'izy ireo betsaka ary miovaova be ny distro! Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra.
Hosedraina izany, efa manana OpenSuse sy Manjaro ao anaty lisitra aho.
Mitovy amiko ihany ianao tamin'izay. Rehefa avy reraky ny Ubuntu aho dia nanomboka nanandrana ny zava-drehetra ary niafara tamin'ny OpenSUSE, izay distro no tena anoroana azy, ny zavatra ratsy dia tsy Rolling Release amin'ny natiora izany, fa azonao atao ny manova ny toerana fitahirizan'ireo an'ny Tumbleweed ary heverina fa manao izany. Famotsorana Rolling.
Na izany na tsy izany, tamin'ny farany dia nesoriko izy io ary novaiko ho LMDE satria nitady distro hampiasana amin'ny Cinnamon aho. Na izany aza tsy dia resy lahatra tanteraka aho satria ny tadiaviko dia ny tena Rolling Release, izay tsotra amin'ny fotoana iray ihany ary betsaka noho ny milamina rehetra. Ka eto aho, nametraka an'i Manjaro sy Sabayon aho androany izay tsy maintsy ho ny tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Mbola tsy nanapa-kevitra aho satria mikasa ny hanandrana azy ireo mandritra ny iray volana farafahakeliny, saingy miteny aminao aho hametraka ny iray amin'ireo roa ireo ary raha tsy maharesy lahatra anao izy ireo dia apetraho ny OpenSUSE.
Mahaliana izany saingy hanana fanohanana ny kanelina ve izy?
Marina izany: gnome-extra / kanelina-1.6.7.
Heveriko fa azo apetraka izy io, saingy tsy fantatro ny fomba fiasan'izany.
Salama, misalasala aho ny amin'ny distro aiza no tazomiko. PCLinuxOs sy Sabayon no roa azoko soloina. Ankehitriny, aorian'ity indray mitoraka ity, hiteny ve ianao fa ny Sabayon no mbola safidy tsara indrindra amin'izy roa?